Mwari Achagadza Hurumende Inotonga Pasi Pose Here? | Dzidza Kubva muShoko raMwari
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Greenlandic Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Lithuanian Malagasy Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swedish Tagalog Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Mwari Achagadza Hurumende Inotonga Pasi Pose Here?
Nyaya ino inokurukura mibvunzo yaungava nayo uye inokuratidza paungawana mhinduro dzacho muBhaibheri rako. Zvapupu zvaJehovha zvichafara kukurukura newe mhinduro dzemibvunzo iyi.
1. Nei pachifanira kuva nehurumende inotonga pasi pose?
Mazuva ano hapana kusina matambudziko. Kune dzimwe nyika, vakawanda varombo uye vanodzvinyirirwa. Asiwo kune dzimwe nyika vakawanda vane zvinhu zvakawandisa zvavasingatomboshandisi. Saka panodiwa hurumende inotonga pasi pose inogovanisa vanhu upfumi huri panyika zvakaenzana.—Verenga Muparidzi 4:1; 8:9.
2. Ndiani anokodzera kutungamirira hurumende inotonga pasi pose?
Vakawanda havafariri pfungwa yokuti panyika pave nemutongi mumwe chete nokuti hapana munhu anogona kuita basa racho nemazvo. Hapanawo munhu angafarirwa nevanhu vose. Uyewo hazvigoni kuti munhu atonge vamwe orega kuita uori. Saka pfungwa yokutongwa nemunhu mumwe chete munyika yose inotyisa vakawanda.—Verenga Zvirevo 29:2; Jeremiya 10:23.
Jehovha Mwari akasarudza Mwanakomana wake Jesu kuti atonge vanhu nokusingaperi. (Ruka 1:32, 33) Jesu akatombogara pasi pano. Paaiva pasi pano akarapa vanorwara, akadzidzisa vanyoro uye aimbowana nguva nevana. (Mako 1:40-42; 6:34; 10:13-16) Saka Jesu ndiye Mutongi akakodzera.—Verenga Johani 1:14.
3. Zvinokwanisika here kuva nehurumende imwe chete pasi pose?
Mwari akagadza Mwanakomana wake kuti atonge nyika ari kudenga. (Dhanieri 7:13, 14) Sezvo munhu anotonga vanhu asingafaniri hake kunge achigara muguta rimwe nerimwe raanotonga, Jesu haafaniri hake kuuya pasi pano kuti atonge vanhu.—Verenga Mateu 8:5-9, 13.
Munhu wose achabvuma kutongwa naJesu here? Kwete. Vaya chete vanoda kuita zvakanaka ndivo vachabvuma. Jehovha achaparadza vaya vanoramba Mutongi waakasarudza ane rudo uye akarurama.—Verenga Pisarema 37:9-11.
4. Mutongi wepasi pose achaitei?
Sezvinoita mufudzi ari kuunganidza makwai ake, Jesu ari kutounganidza vanhu vanyoro vemarudzi ose uye ari kuvadzidzisa kuti vadanane sezvinodiwa naMwari. (Johani 10:16; 13:34) Vanhu ivavo vanobva vatsigira Jesu neutongi hwake nemwoyo wose. (Pisarema 72:8; Mateu 4:19, 20) Iye zvino vari kutoita mushandirapamwe munyika yose wokuzivisa vanhu kuti Jesu ava Mambo.—Verenga Mateu 24:14.
Munguva pfupi iri kuuya Jesu achashandisa simba raainaro kuti asunungure vanhu pahurumende dzine uori. Jesu akasarudza vamwe vanotsigira utongi hwake kuti vatonge nyika pamwe chete naye kudenga. (Dhanieri 2:44; 7:27) Umambo hwaJesu huchaita kuti nyika izare nokuziva Jehovha uye huchaita kuti pasi pave neparadhiso yakaita seyaivapo pakasikwa vanhu vokutanga.—Verenga Isaya 11:3, 9; Mateu 19:28.
Nei Mwari Akatuma Jesu Panyika?
Chii Chichaitika paZuva Rokutongwa?